BACADLOW WIXII XUNBA MA XAAWAA LEH!!!
Weligaa ma aragtay Soomaali laga xanaajiyey? Mase aragtay Soomaali wuuxuu dhibsaday arkay? Mase maqashay oraahda ka soo baxda afka aan la koontarooli Karin ee Soomaali la yaaban quruxda gabadh Soomaaliyeed? Mase u fiirsatay oraahda ka soo baxda afka aan la koontarooli Karin ee Soomaali tilmaamaya sida ay foolxumadu u eg tahay? Mase u fiirsatay xadgudubka iyo takoorka ka buuxa maansada Soomaaliyeed?
Akhristow waxaa jira hadal layska yiraahdo, hadal layskaga kaa yiraahdo iyo hadal lagugu yiraahdo ama lagaa yiraahdo. Hadalada layka yiraahdo ama laysaga kaa yiraahdo waa jees jees iyo hadal ujeedo badan aan huwanayn oo sarkhaan, marqaan ama nacnac ay keentay. Hadalka lagugu yiraahdo ama lagaa yiraahdo waa mid loo sameeyey ujeedo cad, bareer, gabasho la’aan ama kas iyo maag iyo si niyad ah.
Dhaqan ahaan iyo taariikh ahaan maansadu waxay badanaa ka mid tahay hadalada sida niyada ah qofka uga soo baxa. Maansadu waa oraahyada qofka isagoon is ogayn uu tiraabo si culeyskii ku kelifay marinteeda uu uga nefiso. Waxay maansadu ka soo go’daa laabta hoose, qalbiga iyo caloosha, laakiin waxaa nasiib xuma ah in maanta qof waliba sheegto Abwaan isagoo berya dhan loox ku soo xar-xariiqaya wixii uu tirin lahaa soona xafidaya. Maansadu maaha xafidaad, xar-xariiq iyo qor-qorid ee waa wax ku yimaada gubasho, hinqasho iyo laab la kac. Maansadaa daacada loo tiriyey ayaa waxaa ka buuxa takoor aan meelna loo deyin oo wixii xun ee la qoonsadaba la yiraahdo Midgaankaa leh! Guntaa leh! Gobtu shaqo kuma laha!
Waxaa sida maansada loo gocdaa oo si qalbi furan loo dhahaa cayda, afxumada iyo habaarka oo Soomaalida ku badan caadana ay u leedahay. Waxay Soomaalidu tiraahdaa iyagoon is ogeyn Midgaanyahow! Boonyahow! Yibiryahow! Jareeryahow!iwm. Laakiin marka uu qalbigii maqnaa ee afkan iska ciyaya xakamayn waayey soo noqdo ayuu qofkii naxaa! Nush! Naxtin, Naxdin! Naxsin! Waar maxaan idhi? Ii, Ii, Een, Een, Oow, Ixiiiiiiii! Laaaaa!. Maxaa cir fiiris iyo ismaaweelin ah! Maxaa gidaara salaan bilaabmaya!
Akhristoow dhowaan ayaa Gabyaaga Abshir Bacadle wuxuu tiriyey gabay uu uga hadlayey Qolo Laandheer oo Gob sheegataa oo haddana yeelatay ficilada lagu yaqaano dadka Gunta ah. Wuxuu ka hadlayaa Beesha Reer Ishaaq oo uu leeyahay: “ GOB CUNSURI AHOO WAXAAD TIHIIN FICIL GUMEED YEESHAY!” Waa cinwaanka gabyagii uu Bacadle tiriyey ee kusoo baxay Somalitalk.
Waaxaanse la yaabay hadalkaa kor ku qoran iyo sida uu Bacadle isugu qiri waarey cunsuri ee uu cid kale dusha uga saarayo. Akhristoow waxaan doonayaa inkastoo aan lasoo wada koobi Karin inaan xoogaa ka sheego waxyaabaha ugu badan ee uu Soomaaligu ku hadaaqo marka uu arko wuxuu dhibsado, naco, ka baqo, quudhsado, yaso, salalo iwm. Waana waxyaabaha kala duwan ee ay Soomaalida is Sareysiisaa u taqaano ficil Gumeed.
Waa yaabka yaabkiis iyo amankaag! Soomaalidu quraafaad badanaa! Koley anigu magacba u waayey quraafaadkooda, beentooda iyo borobagaankooda inaan “Cawro” iraahdo mooyee! Waxaa la yaab leh in ay Soomaalidu qarisay ninkii la socday ee la waalaalka ahaa Midgaanka. Sheeko Xariirtu waxay nabaraysaa in labada ninba ay wada cuneen Bakhtigii, laakiin uu Soomaaliga Gobta sheeganayaa uu iska matajiyey 3 berri kadib markii reero loosoo martiyey. Haddaba waa yaabe muxuu iska matajiyey? Yaase ka saaraya dheefshiidkiisa (System) xaaraanta bakhtiga? Haddii aad gaajooto oo aad bakhti aragto miyaadan cunayn mise geeridaad isu gogli? Imisaa Dagaalkii Sokeeye bakhti cunay oo hooyadood, carruurtoodii oo meyd ah cunay? Haddaba ninkii la socday Midgaanka ee maanta ku dhexjira Ajiga waa kuma? Yaa noo sheegi kara ninkaas iyo tafiirtiisii? Haddii uu ninkaasi dhalay dhamaan Ajiga maanta Soomaaliya jooga, markaa sow Ajigu Barbar Xaaraan maaha? Sow bakhtigii lama cunin kii la deyriyey? Quraafaadka uu Ajigu isugu sheekeeyo iyo dhibaatadii laga dhaxlay ee ka timid sheeko xariirta. Ka akhri qoraalkii hore Akhri halkan ama halkan.
BAKHTI KA SHAQEEYE
Inta badan dadkan la yaso ayaa lagu ceebeeyaa shaqada ay u hayaan bulshada. Waa shaqo loo baahan yahay oo lagama maarmaan u ah nolol maalmeedka iyo horumarka Soomaaliya tiigsanayso. Waxaase nasiib darro ah in ay Soomaalida isla weyni ay cay, yasid iyo fadeexad ugu dhaqaaqaan muruq maalka, inta ay iyagu isku mashquulinayaan tuugsi, shaxaad iyo geerisheyn. Dadkan shaqaystaa waxay ka dhaxleen waalidkood waxayna haystaan xirfad ay uga tegayaan ilmahooda. Laakiin bal ila eega waxa ay kuwa caytamaa uga tagayaan ilmahooda ee ay barayaan: Shaxaad, tuugsi, iskudulnoolaad, laaluush iyo isdaba marsiin. Maxaynu aanu gaaraynaa haddii aanu shaqooyinka aanu ka faano aanu ugu kala tartameyno qurbaha oo uu Ajigu isleeyahay Midgaanku ku arki maayo ee musqusha hool, hilibka rif, birta tun. Maxaynu horumar gaareynaa haddiiba dadkii cilmiga lahaa ee noo qabanayey shaqooyinka kala duwan lagu oranayo:
Waa tima jare, waa bir tume, waa hargaanti, waa hilible, waa isbasiini, waa beeraley, waa fuundi, waa dheriile, waa bulaacadle, waa umuliso, waa geeda yaqaan, waa Yibir(dhakhtar), waa qudhun ka shaqeeye iwm.
Waxaa Soomaalida dhaqankeeda ka mid ah marti soorka. Waxaa waayadii hore jirtay in qofku uu iska socdo isagoo aysan jirin wuxuu sahansaday ama cid ka horeysa oo uu isku halaynayo waayo wuxuu ogaa in qoyskii uu lakulmaba uu marti soorayo oo uu wan weyn xawda uga jarayo. Xeerkaa uu Ajigu dejistay ayaa meesha ka saaraya martisoorida Midgaanka waayo waxaa uu Ajigu aaminsan yahay inuu Midgaanku yahay fadare ama nijaas. Markaa weel u gooniya ayaa meel loo dhigaa ama ka ay waxaruhu ku cabaan ayaa wax loogu shubaa. Haddiiba ay dhacdo nin Aji ahi inuu gabalku ugu dhaco guri Midgaan, duleedka ayuu ka seexanayaa oo wuxuu ka dugsanayaa dugaaga kale, laakiin marna dhici mayso in cunto Midgaan iyo weel Midgaan wax lagu cuno!Adilee gaajo isku dilay maha!
Wixii xunba Xaawaa leh!. Soomaalidu waxay leedahay hal il oo qudha, ishaasna waxay ku aragtaa Midgaanka. Wixii xumaan ah ee ay sameynayaan uma muuqdaan, laakiin waxaa u muuqda takarta saaran dadka kale. Waxaad maqlaysaa iyagoo eedo kala duwan u soo jeedinaya dadka ay ku magacaabeen Gun. Waxaad arkaysaa iyagoo isugu sheekeynaya Gobtu wixii xun ma sameyso ama wixii basar xunba Midgaankaa leh oo sameeya. Ajigii wax qariba ama si xun u dhaqma ama xeerka ay dejisteen ee lagu cabudhiyo Midgaanka ka talaaba wuxuu sameeyey falalka lagu yaqaano Gunta ee aysan Gobtu shaqo ku lahayn. Eedeymahaas xambaarsan takoorka ayaa waxaa ka mid ah inuu wixii xunba Ajigu dusha u saaro Midgaanka oo uu ku yiraahdo: Waa sharmuud ama sharmuuto, waa dhaqan laawe iyo dhaqan xume, waa goor xun socde iyo si xun u socde, waa diin laawe iyo diin kuma dhaqme, waa fannaan iyo fasahaad, waa kufsade iyo kuuma tudhe, waa…iisii wad
Bulshaduu sumeeyaa oo naga mid maaha!. Waa wax cirkaa laga soo hindhasay!. Waxaa ka mid ah kuwa carruurta dhufsada oo Xanfalay iyo belaayeey adeegsadaan.! Tolow meel ay ku dhintaana lama helee miyey is cunaan! Weligiin ma aragteen Yibir xabaashiis! Basar xumada awoowahood bay ka wataan bakhtiga cunay!.
Dhamaan hadaladaas iyo kuwo ka sii xun xun bay Ajigu isugu sheekeeyaan iyagoo ku qurxinaya sheeko baraleey iyo sheeko xariiro. Waxay iska dhaadhiciyeen oo dadka kale ugu sheekeeyaan in Midgaaku uu basar xunyahay oo: Waa xishood laawe, waa cay badane, waa cuqdadoole, waa sixiroole, waa basaas, waa nac-nacle, waa buufis qabe, waa xushmad laawe, waa….iisii wad.
BIDHAAN BAH DILAN
Muxuu Eebe siiyey qurux! Bal sida loo sameeyey eeg! Biyaha dhuunteeda mareysa baa la arkayaa! Intaasoo dhan oo ay Soomaalidu ku qawsho marka ay arkaan Gabadh Soomaaliyeed oo qurux badan waxaa ka sii tilmaan wacan tan lagu qiimeeyo quruxda la yaabka leh ee aan loo adkaysan Karin! Waa tilmaanta quruxda kama danbaysta ah ee lagaran waayo wax kaloo lagu suureeyo. Wuxuu Soomaaligu oranayaa marka uu ka hadlayo qurux tii ugu danbaysay: “ Bal Naagtaa eega! Qurux badanaa ma Midgaan baa”!!
Soomaaligu wuxuu isku raacay in ay Qowmiyadan ay takooreen ay yihiin kuwa ka sita kana bidhaan wanaagsan, laakiin sow beel cuna qabateyn ay saaran tahay maaha!. Yaa kitaabka Ajiga muqadaska u ah ee la yiraahdo Kitaabul Qabyaala ee uu u mariyo Kaaba binu Qabyaala ku xadgudbi kara. Yaa Aayada 666 Kutubkaas ee ka hadlaysa Takoorka ku xadgudbi kara! Yaa suul gaaban laga dhigaa maaha! Yaa suul goroyo laga dhigaa maaha!.
Wuxuu kaloo Ajigu isugu sheekeeyaa in Midgaanku leeyahay af jubuqsan oo gaaban oo aan bishimo waaweyn lahayn. Sow maadan u fiirsan marka uu Ajigu caayayo Franjiga wuxuu yiraahdo: “ Af jubuqsanaa Gaalkani ma Midgaanbaa!”. Soomaalidu waxay jeceshahay baan filayaa afka dheer ee soo fiiqan iyo ilkaha dhaadheer ee soo taagan. Maxay kuugu taalaa, markii la yimid Qurbaha Afkii dheeraa ee ilkaha fargeetada lahaa silsilad baa lagu wada xiray si ilkaha hoos loogu foorariyo oo afku u soo gaabto bishimihuna ay u yaraadaan. Ajiyow noo daa alaabtayada: marna nagu caay marna nagaga dayo!. Waxaa la mid ah isku dhiibka iyo is qarxiska iyadoo la isticmaalayo magaca Midgaan. Waxaad arkaysaa Ajigoo ku leh Midgaan aan ku socdaa noo! Kutubul Qabyaala aayadiisa 666 aad jebisay ee Ajiyow la soco! Saas ma ku wadee hee!
Ma arkaysaa ilmahaas abti baan u ahay? Ma aragtaa kaas adeer baan u ahay? Ma aragtaa taas habaryar baan u ahay? Ma aragtaa cunugaas eedaan u ahay? Ma aragtaa reerkaas waxaanu nahay ilmaadeer? Laakiin waa ubad khariban oo bulshada inay soo dhexgalaan ay khatar tahay waayo dhinac bay ka sitaan nijaasada. Waxaa ay na dhaxal siinayaan fir xumo iyo haybad darro. Waa Barbar Xaaraan oo hooyadii ama aabihii baa midi Gun yahay oo waa Nasab dhiman. Weligaa iska ilaali oo xataa haddii Ayeeyadood 5-aad ay Midgaan ahayd ficil xun iyo qudhun iyo farsamo xun lagama waayo. Iska jir oo yaan lagugu sirin dhanka ay Gob-ta ka yihiin waayo dhankii kale ayaa sumeysan! Weligaa ka waayi meysid cuqdad iyo isbuus iyo istus!
BURJI IYO BURHAAN LAAWE
Gumeysiga Maskaxdu waa gumeysiga ka ugu daran ee dad lagu isticmaalo. Waa ka dhaadhicin ama ku khasbid qof, bulsho ama ummad in aad ka sareyso oo ay aaminaan. Waa difoose(durbaan tun, taageero) u noqosho qof aan kuu ogeyn. Waa meel cidla ah ka xiiq!. Waa waxa ay bulshada Soomaaliyeed maanta la liidato. Waxaad arkaysaa Soomaalida oo isugu sheekeynaysa sidii uu wadankoodu u burburay iyo dawladaha kala duwan ee ka danbeeya burburkaas haddana waxaad arkaysaa iyagii oo u kala tartamaya isla dawladihii ay cadowga ku sheegayeen. Waxaad arkaysaa Soomaaliga oo la soo taagan inuu asal ka asal iyo ab ka ab uu yahay Binu Qureysh dhulkiisana uusan lahayn oo uu taransid ku yahay. Bal akhri qoraalkii hore akhri halkan.
Waxaad arkaysaa qof hanti Eebahay siiyey oo doonaya inuu dhaafsado dhamaan hantidiisa sidii qaxooti uu ugu noqon lahaa Canada, USA ama Yurub. Markii meelahaas uu tagana: “Wooooooooow! Alla yaa dib ii celiya”! Waxaad arkeysaa Soomaalida oo isugu sheekeynaysa in Franjigu uu ka run badan yahay, ka aaminsanyahay, ka biniaadamsanyahay ummadaha kale ee dunida. Waxaad arkaysaa taariikhda iyo soojireenka la bartaa in ay tahay tii Ferenjiga oo la aaminsanyahay inay ka horeyso kana fiican tahay ta dadyowga kale. Waxaad arkeysaa dhallintii Soomaaliyeed oo lagu qasbayo inay u hogaansamaan wax walba oo uu Kaaba Qabyaalada aan waxna akhrin waxna qorin uu soo jeediyo oo ku saabsan aayahooda iyo mustaqbalkooda. Taasi macnmaheedu waa ma tashan kartid ee anigaa kuu talinaya ee imaqal oo I dhegeyso. Waxaad arkeysaa gabdhihii yar-yaraa oo la qalqalayo iyadoo marmarsiiyo looga dhigayo waa la xalaaleynayaa ama beejadaa laga jarayaa ama sida ay dad badani qabaan fikirka xun ee ah yaysan suuqa gelin. Soomaaliyeey ama qalqala ama silic u dila, waxaa xaqiiqa ah in meel walba oo la tago aad arkaysid dumarkii la soo qalqalay oo meel walba daf yidhi. Ma iska deysaanoo dhibka aad ku haysaan gabdhaha maadaama fikirkiinii xumaa uu shaqayn waayey! Ma iska deysaanoo maadama uu baxay magaca Cheap and Clean!. Yaah! Uunsi iska buuxi, catarna isku dhub, zigtaa, haddana zigtaa, haddana baxarkaa, subixiina beer ku quraaci, Thank you iyo mahadsanidna ku dar! Wow! Jameeykaankii, Frenjigii iyo Madowgii baa yaabay! This is great man! Waxba lagu weydiin maayabee! Adigaaba lagu sii naash-naashayaa! Yaah! Oh! They are cheap and clean dude! Maxaa ka jaban oo ka caraf badan! Waaba Wan weyn oo mididii lagu qali lahaa iyo digsigii lagu dubi lahaa wata! Haddaba maxay tartay Xalaalayntii Fircooniga ahayd haddii ba xaal adduun uu halkaas marayo. Bal akhri qoraalkii hore akhri halkan.
Dhulka Soomaaliya, maskax gumeysiga ugu xun waxaa lagu hayaa dadka laga tira badan yahay. Maxaa ka xun haddii laguu sameystay sheeko xariiro, sheeko baraley oo la baro carruurta yar-yar ka dibna uu jiilba jiil ka dhaxlo. Sheeko xariiradaasi waxay hoos u dhigaysaa fikirka iyo dadnimada Midgaanka waxayna kor u qaadasaa ka Ajiga. Waxaa uu ilmaha yar ee Ajiga ahi ku barbaaraa isagoo ay ka buuxaan sareeyn iyo ka faanid Midgaanka isuna arka inay Reerkoodu leeyihiin Midgaanka.
Akhristoow weli ma aragtay Aji doonaya inuu Midgaan hadal uu yidhi sheego ama dhaajiyo? Ma u fiirsatay sida uu Ajigu afka u qaloocinayo ama uu hadal tacbaan ah oo aan nuxur lahayn uu ugu sheegayo wixii uu Midgaanku yidhi? Waxuusan Ajigu ogolayn inuu marnaba Midgaanku xoolo yeesho, siduu u hadlayo u hadlo, wax barto, ka xoroobo, deegaan yeesho, dulliga ka baxo, la xidido ama la sinaado. Yaa maskaxda dad ka degay!
Waxaan kula dardaarmayaa hal abuurada iyo Abwaanada Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan cunsuriya, Takoorka iyo xumaanta aan loo aaba deyin ee ka buuxda Maansadooda ay tiriyaan. Waxaan Abshir Bacadlena leeyahay :
GACALOW KA JOOG MEESHAN AAD GACAN TOGAALEYSAY!!